China Electric mop fekitori uye vagadziri | Meiling
Nguva yekushanda > 60min (Yakaoma Kuputira); > 40m (Wet Mopping)
Bhatiri Kugona 3200mAh Lithium bhatiri
Kubhadharisa nguva 2.5 Maawa
Net Kurema 2.7KG
Mvura Tangi Kugona 300ml
Saizi yechigadzirwa 124 * 34 * 20cm
Ruzha Chikamu 30-50 dBA
1. 4-mune 1 multifunction
Cordless dual-spin magetsi mop, polisher, waxer, scrubber yekunyorova uye kuoma, uye kuchenesa
Iwe une hunyanzvi waxer polish / wakira pasi rako rehuni kuita nyowani pese paunoda.
2. Zviri nyore kuchenesa mhando dzakasiyana dzenzvimbo uye akasiyana mamiriro
Bata nemhando dzakawanda dzepasi senge pasi pehuni, zvedongo, machena, pamusoro pezvidhinha, laminates, nezvimwe.
kunyorova / kuoma / kupora kukwesha, chimwe chishandiso chine 4 yekuchenesa mabasa: guruva, tsvina yemafuta, tsvina yemukaka, marara ane matope.
3. Mumwe-wokudhinda spraying
Kukurumidza kuomesa pasina tsvina yemvura, inoomesa pasi rako nekukurumidza uye isingasiye kana gwapa remvura. Kutenda kune inokurumidza kutenderera mapedhi. Ruoko rumwe kushanda, pasina kukotama pamusoro, nguva uye simba rekuchengetedza.
4. Ruzha rwakaderera
Ruzha rwakaderera runosvika chete 30-50 dB, ingangoita pasina kurira kwekushanda uye usakanganisa mhuri yako kuti uwane zororo rakanaka.
5. Kutakura kunotakurika uye kumhanya kwenguva refu
Simba rinogona kugara kwemaminetsi makumi matanhatu. Inogona kuchenesa uye kukorobha munzvimbo dzakasiyana, kusangana nezvinodiwa zve200m2 mukati kuchenesa. Yakanyanya kushanda traction bhatiri 3200mmAh Lithium bhatiri, Iyo inonatsa 200sqm mune 60 min mune imwechete kuchaja. Bhatiri rinotakurika rongedza, zviri nyore kutsiva uye kuchaja.
6. Dual kutenderera mapedhi ane simba Motors
Batsira mudziyo wako kufambisa marara zvakadzama, rinorema muviri mukuru nekukurumidza kutsikisa mapedhi Net huremu ndi2.7KG iyo inovimbisa yakakwana yekuchenesa kugona
7. Chiedza che LED
Inobatsira iwe kuti uwane yakaoma-kusvika-nzvimbo dzine rima: sofa, tafura, matafura, mibhedha
8. Nzvimbo dzakachena sekuda kwako
Mop mamakona uye epasi penzvimbo nenzira yakasununguka, yakatwasuka 180°, yakamira 90°.
Pashure: Zvishongo Zvishongedzo zveUltrasonic
Zvadaro: Cordless pasi yekuchenesa
Magetsi Spin Mop
Wireless Magetsi Mop
Wireless Rotary Magetsi Mop